We.com.mm - အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ စနစ်တကျ အသားအရေထိန်းသိမ်းကြမယ်
အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ စနစ်တကျ အသားအရေထိန်းသိမ်းကြမယ်
မိန်းကလေးတို့ရဲ့ အလှအပရေးရာမှာ မျက်နှာအသားအရေကို ထိန်းသိမ်းဖို့က အဓိကကျတဲ့ အချက်ပါပဲနော်။ အပေါ်ယံမိတ်ကပ်တွေ ဘယ်လောက်လိမ်းထားလိမ်းထား ပင်ကိုအသားအရေလေး လှနေမှ မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့အခါလည်း ပိုလှနေမှာပါ။ မိတ်ကပ်မလိမ်းဘဲ နဂိုလှနေရင်တော့ အတိုင်းအထက်အလွန်ပေါ့နော်။ အဲဒါကြောင့် ပျိုမေတို့ရဲ့ အသားအရေအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Skin care လိမ်းနည်းအဆင့်ဆင့်ကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
ဒီ cleansing လုပ်တဲ့ အဆင့်လေးက အရေးကြီးပါတယ်နော်။ မျက်နှာလေးသန့်စင်နေမှ နောက်လိမ်းမယ့် skin care တွေက ပိုသက်ရောက်မှာပါ။ နောက်ပြီး ဝက်ခြံနဲ့ ဆားဝက်ခြံလေးတွေက ကာကွယ်ဖို့ကလည်း cleansing သေချာလုပ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
1.1 Makeup Remover (မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေး)
မိတ်ကပ်လိမ်းထားတယ်ဆိုရင် makeup remover ကို သေချာသုံးပေးပါ။ မိတ်ကပ်တွေစင်ကြယ်သွားဖို့ facial foam (မျက်နှာသစ်ဆေး) တစ်ခုတည်းနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ remover ချွေးပေါက်ထဲအထိဝင်နေတဲ့ မိတ်ကပ်လေးတွေ သန့်စင်သွားမှာပါ။ remover ကို cotton pad လေးထဲ ထည့်ပြီး မျက်နှာပေါ် ခပ်ဖွဖွလေး ပွတ်ဖျက်ပေးရမှာပါ။
1.2 Facial Foam (မျက်နှာသစ်ဆေး)
Remover နဲ့ မိတ်ကပ်ဖျက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အသားအရေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ မျက်နှာသစ်ဆေးလေးနဲ့ မျက်နှာကို သေချာသန့်စင်ဆေးကြောပေးပါ။ ရေစိုနေတဲ့ လက်နှစ်ဖက်မှာ မျက်နှာသစ်ဆေးကို အမြှုပ်ထွက်အောင် ပွတ်ပြီးမှ အဲဒီအမြှုပ်လေးတွေနဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာ စက်ဝိုင်းပုံလေးပွတ်ပြီး ရေနဲ့ပြန်သစ်ပါနော်။
မျက်နှာသစ်ပြီးတဲ့အခါ ပျိုမေတို့ရဲ့ အသားအရေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ Toner တစ်ခုခုသုံးပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်နော်။ အဲဒါမှ မျက်နှာသစ်တုန်းက ကျန်နေကောင်းကျန်နေနိုင်တဲ့ အညစ်အကြေးအကြွင်းအကျန်တွေ လုံးဝကင်းစင်ပြီး အသားအရေကိုလည်း Balance ပြန်ဖြစ်စေမှာပါ။ ချွေးပေါက်လေးတွေကိုလည်း ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်စေမှာပါ။ Toner ကို cotton pad လေးထဲထည့်ပြီး မျက်နှာပေါ် ခပ်ဖွဖွ လိမ်းပေးပါနော်။
3. Moisturizer or Day Cream
Toner သုံးပြီးတဲ့အခါ ပျိုမေတို့ မျက်နှာလေးပေါ်မှာ moisturizer တစ်ခုခု လိမ်းပေးဖို့ မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါတယ်နော်။ အဲဒါမှ ပျိုမေတို့ရဲ့မျက်နှာလေး ချောမွေ့ပြီး အလှပြင်တဲ့အခါ လှသထက်ပိုလှနေမှာပါ။
ပျိုမေတို့ရဲ့ မျက်ဝန်းတဝိုက်က အနုညံ့ဆုံးအရေပြားအတွက် eye cream သီးသန့် သုံးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒါမှ မျက်ဝန်းလေးတွေ အမြဲစိုပြေနေပြီး အရွယ်မတိုင်ခင် အရေးအကြောင်း ဖြစ်တာကိုလည်း ကာကွယ်ပေးမှာပါ။ အရေးအကြောင်းဖြစ်တဲ့အရွယ်ဆိုရင်လည်း eye cream လေးတွေက အရေးအကြောင်းနည်းပါးစေမှာပါ။ eye cream ကို မျက်ဝန်းအောက်ဖက်နားမှာ အစက်လေးနှစ်စက် သုံးစက်တို့ပြီး လက်သူကြွယ်လေးနဲ့ ခပ်ဖွဖွပုတ်လိမ်းပေးပါနော်။
5. Sun block or Sunscreen (နေလောင်ကာလိမ်းဆေး)
ပျိုမေတို့ အပြင်ထွက်ဖို့ အလှပြင်ပြီဆိုတာနဲ့ မသုံးမဖြစ်သုံးပေးရမှာကတော့ Sunscreen ပါ။ အဲဒါမှ ပျိုမေတို့ရဲ့ နုညံ့တဲ့အသားအရေကို နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကနေ ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။ UV ray တွေက အသားအရေမညီတာ၊ အသားအရောင်ညိုစေတာတင်မကဘဲ အရေးအကြောင်းတွေကိုလည်း ဖြစ်စေပါတယ်။ အဲဒီထက်ဆိုးရွားတဲ့ အရေပြားပြသနာတွေကိုလည်း ဖြစ်စေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် sunscreen တော့ မဖြစ်မနေ သုံးပေးပါနော်။
Sunscreen လိမ်းပြီးရင်တော့ ပျိုမေတို့နှစ်သက်သလို မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်ပြီး အလှပြင်နိုင်ပါပြီနော်။
ညဘက်ဆိုရင်တော့ Cleansing လုပ်တဲ့အဆင့်ပြီးရင် Toner > Moisturizer > Eye cream လိမ်းပြီးရင် လုံလောက်ပါပြီနော်။ အဲဒီထက်ပိုသုံးချင်ရင်တော့ Serum တစ်ဆင့် ထပ်တိုးပြီး Toner > Serum > Moisturizer > Eye cream ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က ပျိုမေတို့ရဲ့မျက်နှာပေါ်က ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားဖို့အတွက် တစ်ပတ် တစ်ခါ ဒါမှမဟုတ် နှစ်ခါလောက် Scrub လုပ်ပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ Cleansing လုပ်တဲ့အဆင့်ပြီးမှ Scrub လုပ်ပါနော်။ Scrub လုပ်ပြီးတဲ့အခါ toner သုံးပြီး mask လေးတစ်ခုခု ကပ်ပေးရင် ပျိုမေတို့ရဲ့ အသားအရေလေးကို ပိုမိုနုညံ့စိုပြေနေစေမှာပါ။ mask ကပ်ပြီးရင်လည်း skin care အဆင့်အတိုင်း moisturizer လေး ထပ်လိမ်းပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
ဉာဏ်ကောင်းတဲ့သူတွေသာသိနိုင်တဲ့ အလှအပနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လျှို့ဝှက်နည်းလမ်း (၅) ခု…
Little Mermaid ချစ်သူတွေအတွက် Disney ရဲ့ The Little Mermaid collection မိတ်ကပ်ထွက်ရှိ
အသားခြောက်တဲ့သူတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံး Foundation (၇) မျိုး
မျက်နှာလေးပိုပေါ်လွင်ပြီးလှပသွားစေမယ့် Lace Braid Ponytail ဆံပင်စတိုင်လ်ပြုလုပ်နည်း
ဖျောက်ဖျက်ပစ်လို့မရတဲ့ Celebrities တွေရဲ့ချို့ယွင်းချက်များ…။
မိတ်ကပ်မလိမ်းလည်း မိန်းကလေးတိုင်း လှနိုင်ပါတယ်
အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ်နဲ့ ကြွေလွင့်သွားခဲ့တဲ့ TST အဖွဲ့က Kpop အဆိုတော် Yohan
Spider-Man ရုပ်ရှင်က သရုပ်ဆောင်များရဲ့ လက်ရှိပုံစံများ
အိုမင်းရင့်ရော်မှု နှေးကွေးစေပြီး အရွယ်တင်ကျန်းမာစေမယ့် ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်း ၉ သွယ်
ယောကျာ်းလေးဘဝကနေ လှပတဲ့ မိန်းမချော အသွင်ပြောင်းလဲထားကြသူများ